Amaxabiso ombane: utshintsho lwendlela okanye izilungiso? | Ezezimali
La asingomaxesha amahle amaxabiso ecandelo lombane. Kwiiveki ezidlulileyo, ngelixa iimarike zokulingana zibonile ezinye ukunyuka okuphawulekayoOkufanayo akwenzekanga ngezi zindululo zotyalo mali. Babhaptizwa bekwimeko yokudinwa ngenxa yokonyuka okukhoyo kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Apho amaxabiso axabise ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30, njengelinye lawona macandelo anyusa kakhulu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain.
Kodwa okwangoku ngamaxabiso ecandelo lombane ilahleko ekhokelayo kwi-Ibex 35. Ngelahleko kwiseshoni nganye yokurhweba ngeenxa yepesenti enye. Ukuqaqambisa ubuthathaka obukhulu eli candelo elinabo ukusukela ekuqaleni kwentwasahlobo. Ngelixa kwelinye icala, icandelo lobuchwephesha alikhuthazi imeko ukuba iphuculwe, ubuncinci kwixesha elifutshane. Ukongeza, icandelo elilungileyo labahlalutyi bezemali bakhuthaza abatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba batshintshe izikhundla zabo kolu khuseleko.
Kodwa akusayi kubakho khetho ngaphandle kokuhlalutya ukuba okwenzekayo kula maxabiso esitokhwe kungenxa yotshintsho kwindlela okanye ukuba, ngokuchaseneyo, yinto nje izilungiso nje kuseto lwamaxabiso. Nangona kusafuneka banike imiqondiso emininzi malunga nokwenzekayo kunye nexabiso lelinye lawona macandelo abalulekileyo ezabelo. Kuba, enyanisweni, idatha ethile yokubaluleka okhethekileyo isalahlekile ukunika isifo esichanekileyo okanye esingachananga.
1 Amaxabiso ombane: kwenzeka ntoni?
2 Kude kumaxabiso aphezulu
3 Kuxhaswe kukuhanjiswa kwezahlulo
4 Aza kuma phi amaxabiso akho?
5 Iicawa zihlasela umbane
Amaxabiso ombane: kwenzeka ntoni?
Kukho into ebonakalisa kakhulu kwaye ayikho enye ngaphandle kwamathandabuzo ayenziwayo kwezopolitiko zaseSpain ngenxa yesiphumo inkqubo yonyulo. Ayothusi into yokuba icandelo lombane lelinye lawona lawulo kwaye lixhomekeke kwizigqibo zikarhulumente olawulayo. Ngale ndlela, ukungaqiniseki kubangela ukuba amaxabiso ezabelo zawo atsale ezantsi kwezi ntsuku zokurhweba. Apho kungagunyaziswanga ukuba iyaqhubeka nokwenza njalo kwiiseshoni ezilandelayo. Ngayo, abatyali mali bazakuphulukana nenxalenye yezibonelelo abazifumeneyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa uxinzelelo lokuthengisa luyathatha indawo ngokucacileyo malunga nabathengi. Kwisiphumo sokugqibela esenziwe okokugqibela. Nangona kuya kufuneka siqwalasele kakhulu into enokwenzeka ngaphambi kokufika kweenyanga zehlobo. Apho nantoni na enokwenzeka kuxhomekeke kwindaleko yeemarike zezabelo, kokubini kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu. Kwelinye lamacandelo adala ukuthandabuza ngakumbi phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kude kumaxabiso aphezulu
Isiphumo sokuqala solungiso kukuba amaxabiso abo aya esiya kude kumaxabiso abo aphezulu. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zala maxabiso kukuba kunjalo hlala kumanqanaba aphezulu Ngawo onke amaxesha, kuya kufuneka silinde ukuze sibone ukuba yintoni umphumo wokugqibela. Kungenxa yokuba ayinakulityalwa ukuba emva kwabo bonke bakwizikhundla ezifanelekileyo kakhulu kwimidla yabo, nangona ingekho kangangeeveki ezimbalwa ezidlulileyo. Apho isitshixo siyakuhlala kwakhona kwakhona, la maxabiso anokugqitha kwelona xabiso liphezulu livelisiweyo kulo nyaka.
Kwelinye icala, kufuneka iqondwe into yokuba yonke le ntshukumo inokuba sisiphumo sonyuso lwamva nje kwiintsuku okanye kwiiveki ezidlulileyo. Awunakulibala ukuba yonke into isenokwenzeka kwiimarike ze-equity ngaphambi kweqonga into enokuzisa uqoqosho ukusuka kula maxesha achanekileyo. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, lumka kakhulu malunga nento enokwenzeka ngaphambi kokufika okulindelweyo kweenyanga zehlobo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Into ebaluleke kakhulu ukuba ithathelwe ingqalelo ngeli xesha.
Kuxhaswe kukuhanjiswa kwezahlulo
Elona galelo lilungileyo kwizitokhwe zombane lixhaswa sisabelo esiphakamileyo esisasazwe phakathi kwabanini zabelo. Kunye inzala ukuya kuthi ga kwi-7%, yenye yezona zinto zibalulekileyo kwezemali kweli. Kangangoko ukwenza iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo. Ngokuhlawulwa okuqinisekisiweyo kunye nokumiselweyo minyaka le oku kuya kunika imali ethe kratya kwiakhawunti yokonga yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphezulu kwengeniso eveliswe ngamanye amacandelo emarike yemasheya yaseSpain. Njengenkuthazo ecacileyo yokutyala imali kwezi asethi zemali.
Ngelixa kwelinye icala, sisicwangciso-qhinga esinamandla sokutyala imali yenza ingxowa yokonga imali zethuba eliphakathi nelide. Ngaphandle kokushiya iimarike zokulingana kwemali, njengoko kunjalo umnqweno wabatyalomali abaninzi abancinci nabaphakathi. Kuba ukongeza, inzuzo eyongezelelweyo inokufumaneka kutyalo-mali lwenkunzi yethu ekhoyo. Kwelinye icala, inokuthi ithathelwe ingqalelo njengesicwangciso sotyalo-mali esijolise kwiprofayili ekhuselekileyo okanye ekhuselayo ngabasebenzisi beemarike zentengiso. Ngaphezulu kwengeniso eveliswa yimveliso zebhanki yesiko ngoku, kunye nemida yokulamla engadluli kwi-1%.
Aza kuma phi amaxabiso akho?
Kule meko, kufanelekile ukuba kuthathelwe ingqalelo ukuba amaxabiso ezabelo zeenkampani ezikwicandelo lombane anokufikelela phi. Kungenxa yokuba, isitshixo esinye silele kwinto yokuba ukuxhathisa okudala okube kukuxhasa ukubaluleka kokunye akukoyiswa. Elinye lawona manqanaba aphambili lixabiso ezazinazo ezi nkampani ngaphambi kokuba i-rally ye-bullish ibathathe kwizikhundla zabo. Kwaye kwimeko ethile ye-Endesa ihamba nge amanqanaba aphakathi kwe-19 ukuya kwi-20 ye-euro ngesabelo ngasinye. Kuya kuba yimfuneko ngokupheleleyo ukuba bangagqithi kuyo ukuze bagcine, ubuncinci okomzuzwana, imeko ephezulu kwixesha elifutshane neliphakathi.
Ngelixa kwelinye icala, kuyakufuneka kuthathelwe ingqalelo amanyathelo athi urhulumente ophuma kunyulo oluzayo Kwilizwe lethu. Into eya kufaneleka kakhulu ekumiseleni indaleko eziza kuthathwa ziinkampani zombane ukusuka kuloo mzuzu, ngengqondo enye okanye enye. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwendalo yezobuchwephesha enokuthi ikuncede ibhalansi ekumiselweni kwamaxabiso ayo, njengoko ibonakala ngakumbi xa ujongene nemicimbi etshisa iphulo lolonyulo. Ngamehlo athe ntsho kumanyathelo azakuthathwa kula maxesha.
Iicawa zihlasela umbane
Kwaye asinakulibala ukugxeka okunamandla kwecandelo ebesenziwa ngusopolitiki osekhohlo. Apho umanyano esinokuthi sigqibe kulo kubongameli bukaRhulumente, Pablo Iglesias, kwiiCanary Islands utyhola iinkampani zombane ngokuthenga abaphathiswa noomongameli ukuba babe namandla angaphezulu. E-Las Palmas, u-Iglesias ufundile uluhlu lwama-30 e-PP kunye ne-PSOE kwezopolitiko ezinxulunyaniswe neenkampani ezinkulu zamandla, ukhusele isicelo sakhe sokwenza inkampani yamandla kawonkewonke kwaye wagxeka ubucala be-Endesa. Into ethi, ngaphandle kwamathandabuzo, ayizukuthandwa ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi abanezikhundla ezivulekileyo kweli candelo lezabelo zoluntu.
Ingakumbi ukuba uyinxalenye, okanye uxhasa urhulumente omtsha ophuma kwindawo zokuvota kule ntwasahlobo. Apho amazwi ebengakhange asilele ekuphembeleleni ukungabikho kwemodeli yokuvelisa. Ukuba ngu imodeli eqhelekileyo kwaye ayinayo inkululeko epheleleyo ukuze unikezelo lokuba uninzi lweenkampani ezikwicandelo lezombane zisungule kubasebenzisi zinokuphuculwa. Kwimeko apho kukho imeko ethe chu yokuya kumandla ahlaziyekayo, ubuncinci kwixesha elide. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba u-Iglesias usikhusele isicelo sakhe sokwenza iziko likarhulumente "elijonge ngqo ebusweni nakubantu babucala" kwaye livumele ukwehliswa kwetyala lombane. Into enokuthi ichonge ukutsalwa okutsha okuvela kula maxabiso.
Kwaye kukuba bavukile kakhulu kumaxabiso abo kwiinyanga ezidlulileyo ukuya kwinqanaba lokuba ezi nkampani zityebe ngokugqithiseleyo. Njengenani elilungileyo labahlalutyi beemarike zezabelo belumkisile. Bathi lixesha lokulungisa izikhundla kwezi zindululo zemarike yemasheya, kwanangendlela yokuthengisa ekhethekileyo. Akumangalisi ukuba baqwalasele ukuba banendlela encinci yokunyuka kwaye ke amandla abo okuhlaziya asondele kwinqanaba le-null okanye alibi njengakwimeko ethile yeenkampani zombane. Apho kukho okungaphezulu kokulahleka kunokufumana okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amaxabiso ombane: utshintsho lwendlela okanye izilungiso?